USA Yakapa Mhosva Inotungamira kuna Julian Assange Kusungwa | Linux Vakapindwa muropa
Julian Assange akasungwa nezuro (nhau dzasvika), China, Kubvumbi 11, na Metropolitan Police Service vamiririri uye achange ari kukamba yemapurisa yepakati muLondon, kwaachagara asati aunzwa pamberi peDare reDunhu reWestminster nekukurumidza sezvazvinogona.
ILondon Metropolitan Police Service ndaive nebasa rekuita iwo mvumo pachinzvimbo cheWestminster District Court apo mumiriri akamukoka kuti abve kumumiriri mushure mekunge hurumende yeEcuadorian yabvisa hupoteri (kuchengetedzwa kwake).
Vakuru veBritish vakateerera mutemo wekusunga muvambi weWikiLeaks mukupindura chikumbiro chekuwedzeredzwa kubva kuUnited States mushure mekunge Ecuador yabvisa hupoteri hwavo kumumiriri wayo muLondon.
Pane yake Twitter account, Jennifer Robinson, Gweta raJulian Assange rinosimbisa:
Assange akasungwa kwete kwete chete nekuda kwekutyora mamiriro ekuburitswa kwake pa bail, asiwo nechikumbiro chekudzosera muUnited States.
1 Mhosva ndedzipi?
1.1 Julian Assange achaendeswa kunogamuchira kutongwa nemutongo
United States yakaburitsa kupomedzerwa kurwisana naJulian Assange uye ndeyekuti USA inopomera muvambi weWikiLeaks wekurangana kuba mafaira akavanzika yehurumende yeAmerica.
Mukutongwa, hurumende anodaro Assange akashanda naChelsea Manning kuwana magwaro akapatsanurwa.
Vachuchisi vakati Manning akawana mafaira ehurumende, akaapa Assange, ndokuzoshanda pamwe naAsange kuyedza kupaza pasiwedhi netiweki yehurumende.
Mhosva inotsanangura kutaurirana pakati peManning naAsange kutanga kwegore ra2010.
Shure kwaizvozvo, WikiLeaks yakaburitsa cache hombe yeHurumende Dhipatimendi teregiramu uye Manning akapomerwa mhosva.
Waive akatongerwa kujeri, asi mutongo wake wakadzorwa neMutungamiri Obama. Mwedzi wapera, akaiswa mutirongo zvakare nekuda kwekuramba kupupura nezve WikiLeaks.
Vachuchisi vakati zvakare Assange anga achishingairira kukurudzira Manning kutarisa zvinyorwa, ndichitaura pane imwe nguva kuti "maziso ekumbomira haatombopera, mune yangu ruzivo."
Iye zvino, Assange anopomerwa mhosva yekuwana komputa uchiziva uye pasina mvumo, kuwana ruzivo rwakatemerwa nehurumende yeUS kuti ichengetedzwe kupokana nekusabvumidzwa kusabvumidzwa.
Nezvikonzero izvi zvekudzivirira kwenyika uye hukama hweveruzhinji.
Kunyanya, magwaro edziviriro enyika akatsanangurwa se "Chakavanzika Chekudzivirira" nechikonzero chekutenda kuti kana ruzivo rwakadai rukaburitswa, runogona kushandiswa kukuvadza United States.
Julian Assange achaendeswa kunogamuchira kutongwa nemutongo
Uyewo anopomerwa mhosva yekurangana kuita komputa kupindira neruzivo rwechakavanzika yaanotarisana nayo kusvika kumakore mashanu mutirongo.
Mumhosva, zvinonzi "chinangwa chikuru cherangano hwacho hwaive hwekutsvaga nekutapurirana naManning kweruzivo rwekudzivirirwa kwenyika yeUS.
Zvekuti iyo WikiLeaks inogona kuiparadzira pachena kuUnited States. yako webhusaiti «.
Hurumende yaigona kupamha dzimwe mhosva kupokana naAsange pane imwe nguva inotevera.
Kunyangwe kupomerwa kwaJulian Assange Inoenderana nekufungidzirwa kuyedza kutyora password, kuyedza kunoratidzika kunge kusingabudirire, kunoramba kuri pamudzi, kurwisa kuburitswa kwemagwaro akaburitswa uye chiito chazvino mukuyedza kutora makore anoda kusvika gumi ekuranga munhu akayambira uye muparidzi wegwaro irimo.
Zvikamu zvakasiyana zvemupomero zvinotsanangura zvakajairika maitiro eutapi venhau, sekushandisa gore kuchengetedza kana kuziva ruzivo rwakarongwa kana kubvisa humbowo nezvechinowanikwa.
Zvimwe zvikamu zvinogadzira zvakasununguka zvema software zvishandiso seLinux uye Jabber vanofungira.
Uye kunyange isu takazorodzwa kuti hurumende haina kusarudza kuisanganisira -maposi-akavakirwa mhosva nhasi, kana Assange aburitswa nemazvo, hurumende inogona kuburitsa dzimwe mhosva. Haafanire kudaro.
Kudonhedza chikamu chakakosha chekufambiswa kwemahara kweruzivo kwakakosha kudemokrasi yedu.
Kumhan'arira pamusoro pezvinyorwa zvakaburitswa, kusanganisira ruzivo rweyakavanzika ruzivo chikamu chakakomba chekutapa nhau kweAmerica.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » USA yakamhan'ara mhosva dzakatungamira mukusungwa kwaJulian Assange